Xiaomi Mi Laptọọpụ egwuregwu, laptọọpụ ika maka ndị egwuregwu | Akụkọ akụrụngwa
Ihe omume nke Xiaomi mere na Shanghai, abughi naanị wetara ọkọlọtọ kachasị ọhụrụ gbasara ekwentị mkpanaaka. Ma ika ahụ jikwa laptọọpụ ọhụrụ wee ju gị anya. Oge a lekwasịrị anya na ndị na-egwu egwuregwu na ọ ga-adị na nsụgharị abụọ. Ọ gbasara Laptop Xiaomi Mi Gaming.
Laptọọpụ a, nke nwere obere ihe mara mma mara mma, dị ntakịrị karịa ma e jiri ya tụnyere ihe ụdị ndị ọzọ na-enye anyị. Chassis ahụ dị mma ma ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ebumnuche nke ịdọta uche na ọkụ na ọdịdị siri ike. Nke a Xiaomi Mi Gaming Laptop nzọ na a ihe mara mma maka ndị na-ege ntị na ike ga-amasị ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu.
Nke mbụ, anyị na-eche otu egwuregwu ruru 15,6 sentimita asatọ na diagonally nke nwere okpokolo agba dị ezigbo mkpa iji nye ọkwa ya zuru oke. Ọzọkwa, Chassis na-enweta ihe a ọkpụrụkpụ nke 20,9 millimeters na ngụkọta ịdị arọ ya bụ kilogram 2,7. Nke ahụ bụ, ọ bụghị ngwaọrụ dị mfe iji ebufe kwa ụbọchị.
Ka ọ dịgodị, Xiaomi Mi Gaming Laptop ga-enwe nhazi abuo abuo: onye nwere ihe nhazi Intel Core i5 (ọgbọ nke asaa) na kaadị eserese NVIDIA GTX 7. Nhọrọ nke abụọ, ma dịkwa ike karị, ga-ebu Intel Core i1050 processor (ọgbọ nke asaa) na kaadị NVIDIA GeForce GTX 7.
N'aka nke ọzọ, RAM ga-eru karịa 16 GB na nchekwa usoro bụ ngwakọ; N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-enwe 256 GB SSD unit ebe ị nwere ike ịchekwa sistemụ arụmọrụ na mmemme a na-ahụkarị, ebe mpaghara nke abụọ ga-abụ diski igwe na 1 TB nke ohere. Na mgbakwunye, anyị ga-enwe mgbakwunye mmiri iji tinye diski SSD ọzọ.
Banyere keyboard nke laptọọpụ a na-akwado maka ndị na-egwu egwuregwu, anyị ga-agwa gị na ọ bụghị igwe, ọ bụ ezie na ọ nwere ọkụ ọkụ ọkụ na ị nwere ike ịhazi ọ masịrị gị. O nwekwara ọtụtụ programmable igodo; otutu ọdụ ụgbọ USB-C, mmepụta HDMI, na onye na-agụ kaadị nchekwa.
Ọ bụrụ na ị nọ na-eche, Xiaomi na-akụ nzọ na usoro jụrụ oyi dị mma nke ga-egbochi laptọọpụ ọkụ n'oge ọ bụla. Na mgbakwunye, o nwere ụzọ okwu stereo nke na-enye ụda gbara gburugburu ekele maka teknụzụ Dolby Atmos. Na ngwụcha, Laptop Xiaomi Mi Gaming a agaghị ahapụ China maka oge ahụ. N'ebe ahụ ụgwọ ya ga-adị Euro 750 maka ụdị kachasị obi umeala na euro 1.150 maka elu nke nso a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Laptọọpụ » Xiaomi Mi Gaming Laptọọpụ, laptọọpụ ika maka ndị egwuregwu
Xiaomi na-eme ihe nke ọma ma na-agbasi ike n'ihe ọ na-eme, laptọọpụ a bụ ezigbo anụ ọhịa, mana ọnụahịa ahụ yiri nke dị ugbu a n'ahịa.
Zaghachi Pedro Reyes